“အတွေးစလေးတွေ”: အဓိက စည်းကမ်းချက် ၅၅ ချက် . . .
Posted by Han Kyi at 4:00:00 pm
ကျောင်းစာ တင်မကဘဲ လူမှု့ ပတ်ဝန်းကျင် လူနေမှု့အဆင့် အတန်း ကိုပါ တပါတည်း သင်ပေးသွားနိုင်လို့ပါ ။
အချက် ၅၅ ချက်ကို မနက်နေ့လည်ညနေ ခွဲပြီး ဖတ်သွားတယ်။ ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ အချက်တော်တော်များများ အတော်လေး ကောင်းတယ်။ ကလေးတွေကော ဆရာတွေကော ဆရာတပည့်မဟုတ်သူတွေရော အားလုံး မှတ်ယူစရာတွေချည်းပါဘဲ။
ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ ဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပုံစံပြီး အမြည်းလေးတွေ ထည့်ပြီး ဒီဥပဒေသ ၅၅ ချက်ကို ပင်မထားလို့ စာအုပ်တစ်အုပ်လောက် ပုံနှိပ်အဆင့် တင်ပေးလိုက်ရင် သင့်တော်မယ် ထင်တယ်။ အဆာပလာကို ဆီလျော်သလို ထည့်သုံးလိုက်ရင် စာမျက်နှာ တစ်ရာကျော် စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ်လောက်တော့ ထွက်လာလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကို အခြေခံ ရေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လဲ လူသားမှန်ရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေချည်းပါဘဲ။
ဒီလောက် အရှည်ကြီးကို ညတွင်းချင်း ဘာသာပြန်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်မှာရော ဘလော့ပေါ်မှာပါ တင်ပေးတဲ့ ဆရာဟန့်စေတနာကို လေးစားပါတယ်။
Thanksalot for the article. Please let me share on facebook.